Anna Kurkurina - fampiasana ny fahaverezan'ny lanja
Tsy misy mahasoa kokoa noho ny fananana lanjany noho ny fampiofanana matanjaka, farafaharatsiny, hoy ny mpilalao matihanina manerantany, Anna Kurkurina.
Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana an'i Anna Kurkurina dia mety amin'ny fahaverezan'ny lanjany, satria ny fanalahidin'ny fahombiazana dia hetsika tsy misy fiatoana. Na izany aza, noho ny fahaverezan'ny vatany, i Anna Kurkurina dia midika fa ny fiofanana dia eo an-tendrony, araka ny teniny - ny vatany dia manjary lanjany raha tsy misy ny herin'ny fiaran-dalamby, fa mbola mitazona hatrany ianao. Marina izany, satria raha mbola misy ny hery iray - ny tahirin'ny glycogen dia tsy reraka, fa ho an'ny fandoroana fofona dia mila mampiasa izany, ary amin'izao fotoana izao dia sarotra indrindra ny manao ...
Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra izahay fa hanao fanamainana mahery vaika ny vatana amin'i Anna Kurkurina.
Manana hodi-koditra isika 1-1,5 kg, ny ranjony dia lehibe kokoa noho ny soroka, miondrika eo ankavanan'ny lohalika. Damble amin'ny tanany havanana, manaisotra ny fihetsika, miala eo ankavia, mamelatra ny tongony havanana ary manitsy ny tanana havanana, ny tongotra eo amin'ny toe. Miverina izahay ary manao fihodinana mihetsika. Tokony hifantoka amin'ny hipopotan'ny "dovorachivanie" ianao, ny lohalika eo amin'ny lohalika ary ny fametrahana tanana. Miverina amin'ny tanana faharoa isika.
Midina ny fonosana isika, mandohalika, mametraka ny tanantsika eo amin'ny tany. Ny lohalika havia dia eo amin'ny tany, ny ratra ankavanana dia rovidy amin'ny tany ary miverina. Amin'ny fofonaina, dia mametaka ny tongotra havanana amin'ny sandriny havanana amin'ny zoro havanana. Ny tongony dia mifanaraka amin'ny tany, mihetsika ny fehy, mihamitombo tsikelikely ny amplitude. Manova ny tongotra isika.
Mitsangana, raiso ny moana. Ny ranjony dia lava kokoa noho ny soroka, ny hatsikana eo an-tanana dia natsangana ho eny an-tsoroka, mihena ny vatany, manjary masaka ny lohalika. Amin'ny fivoahana dia manolotra tànana miaraka amin'ny horonantsary ambony isika, amin'ny alalan'ny aingam-panahintsika dia mameno ny IP. Manova tanana isika.
Manasongadina ny lainga, ny ratsan-tongotra kokoa noho ny soroka. Mandeha amin'ny tongotra ankavanana amin'ny ankavia isika, atsipy eo amin'ny kiraro, ary miverina any amin'ny FE. Avereno avy amin'ny tongotra havia sy ny lafiny hafa.
Manamboatra ny toeran'ny mandainga isika.
Mitsangana izahay, avereno averina 1 ary mampihatra. 3 miova in-10 isaky ny tsirairay, avy eo miova tanana.
Ho an'ny fanatanjahantena manaraka dia mila disque misy 10-15 kg ianao. Mipetraha eo amin'ny tany, tongotra, lohalika manindrona eo ankavanana. Nataonay teo ambony lohalika ilay horonam-peo, napetrakay tamin'ny tananay ny lohanay. Ny lohalika dia rovitra avy amin'ny tongony ambany, manao fiarakodia 20 isika raha tsy mampidina ny lohalika, ary manamboatra ny tongotra eo amin'io toerana io miaraka amin'ny disk mandritra ny 20 segondra, ary manao 2 fomba mitovy amin'izany. Avy eo dia nandry an-damosina izahay, ny tongotra izay niasa, nokasihinay ny tenanay, navoakanay ny hozatra. Miverina amin'ny lafiny faharoa isika.
Fianakaviana ao an-trano ho an'ny fahavoazana
Pilates ho an'ny mpangataka
Pilates ho an'ny fatiantoka
Rafitra fanosehana avy amin'ny tany iray
Fanatanjahan-tena ho an'ny fidiran'ny lanja
Fampiharana fototra ao amin'ny gym
Fampiasana bisikileta ho an'ny sary
Hyperextension ao an-trano
Fomba fanaovan-jiro amin'ny ankizivavy
Aqua aerobics: tombony
Ahoana no hianaranao ny fomba hahatratrarana 100 metatra haingana?
Erica Herceg sy Artem Pindyura mihaona?
Volana isam-bolana taorian'ny fanalan-jaza
Paraproctitis amin'ny ankizy
Fanomezana ankizivavy 7 taona
Bibidia amoron-dranomasina mandritra ny ririnina - fomba fitsaboana mahasalama tsara sy mahasalama
Salady miaraka amin'ny akoho sy tongolo lay
Ny homamiadan'ny voaly - ny soritr'aretina voalohany
Cake "Spartacus" - fomba mahazatra
14 sakafo izay tokony hohanina aorian'ny fampiofanana
Virgo Virjiny - ahoana no ahafantaranao fa tia azy izy?
Honey amin'ny volo - tombony
Ny biriky dia tsara sy ratsy
Eggplants amin'ny teny Tiorka - sakafo mahasalama mahasalama
Models amin'ny akanjo ho feno
Ny fandrianan'i Cotillard sy i Pitt dia singa mpilalao sarimihetsika!
Flacha - mahasoa
Nitsimoka tao anaty lafaoro i Sazan
Pleurisy - Ny soritr'aretina